Taariikhda My Butros » Shan Online qaladaad Dating Profile Si Ka fogow
Shan Online qaladaad Dating Profile Si Ka fogow
Last updated: Aug. 03 2020 | 2 min akhri
Marka ay timaado shukaansi online, aad shukaansi profile waa muhiim. Waxaad si loo hubiyo in aad ka mid yihiin dhammaan macluumaadka muhiimka ah ee adiga kugu saabsan, laakiin waxa kale oo aad rabto in aad dhawrtaan si cusub oo xiiso leh. Ka dib dhan, Ma rabtaa inaad ka taagan!
Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah talooyin ku saabsan waxa si looga fogaado dhajiyay on online aad shukaansi profile:
Bad / Photos aan haboonayn
Aan wajihi u-horeysay dareenkaa u yihiin wax kasta iyo haddii aad profile photo waa sawir aad ee shotgunning biir ama flipping kamaradaha bakhtiiyaan, aad dhawrsasho darteed laga yaabaa off taariikhaha iman kara. Xataa haddii aad soo qaado sawir aad ugu haboon, isku day in laga fogaado photos in ay yihiin kharibi, oo aad u fog, in aanad u arki karaan wejigaaga ama aad muraayada. Sawir fudud ee aad dhoola runtii cajaa'ibyo.
Higaadda soo noq iyo Khaladaadka Grammar
Ma aha qof kasta waa pro naxwaha ah, taas ayaana u wanaagsan. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad profile waxaa la ciiraya khaladaad higaada iyo naxwaha, Waxaa laga yaabaa in dadka loo gefo ay aad profile aan fikir labaad. Orod jeeg joogay aasaasiga ah iyada oo aad profile inay soo qabtaan khalad kasta oo weyn. Sidoo kale waxaan soo jeedin lahaa in aadan isticmaalin soo gaabiyey qoraalka iyo lingo (sida "ur" halkii "aad" ama "bc" halkii "sababtoo ah") sida aad doonaysid in aad profile in ay noqdaan kuwo cad oo qeexan sida ugu macquulsan.
Dhawaajiyeen oo sida dadka kale
Tan oo dadka jecel in ay akhriyaan, safarka, si uu shineemada u, jimicsiga iyo baxo casho. Haddii aad run ahaantii aad u jecel oo ku saabsan waxyaalaha qaarkood, sida safraya, sharax sii badan oo ku saabsan sababta aad u rabto, meesha aad ku jirtay iyo halka aad dooneyso inaad tagto. Waxay kaa gargaari kartaa noqon bilow ah wada hadal, haddii ay kuu siiyaan a faahfaahin dheeraad yar. Waxa kale oo aad isku dayi kartaa hadleynaa wax ka badan u gaar ah oo ku saabsan nafsadaada. Hey, ma garan kartid cidda kale ee jecel waxaa laga yaabaa xiisadaha pottery ama spelunking!
Been Sheegay Small Details
Waxaa la fahmi karaa in aad rabto in aad soo bandhigto sifooyinka wanaagsan ee aad adiga ku profile laakiin been ah oo ku saabsan faahfaahintaada shakhsi ahaaneed, xitaa kuwa yaryar, Waa fikrad xun. Ku seexo oo ku saabsan dhererkaaga, miisaankaaga ama xataa da'daada aan muuqan kara sida heshiis weyn ee ugu horeeya, laakiin haddii aad ugu dambeyntii la kulmo taariikh aad kulmay online, ay la qaado laga yaabo in ay la yaab iyo bilaabaan in ay is weydiiso wixii kale ee aad ku been abuurtay. Daacadnimo waa siyaasadda ugu wanaagsan.
Ka hadalka aad u yar ama u badan
Ma jirto cid rabta in ay akhriyaan sheeko gaaban markii akhriska ah shukaansi profile online. Marka profiles aad u dheer, Dad badan ayaa jecel inay habayn baxay oo guji si profile soo socda. Sidaas oo kale ayaa la odhan karaa, waayo, waa wakhti aad ugu yar profiles. A profile naftaada faahfaahinaya in hal ama laba weedho ka dhigi kartaa inaad eegto xiiseyneynin. Helitaanka dhexdhexaad ah kaamil ah ka dhexeeya labada waa furaha, si aad ugu haysato profile faahfaahsan iyo ilaa meesha ugu.
Top 10 Tips for Dating Successful